नयाँ आस - नया उमंगको" - साँचो खबर Online Khabar
यी १७ जिल्ला तेस्रो लहरको अति उच्च जोखिममा, सतर्कता अपनाउँनु होस…
बिबाह गरेको तीन महिनापछि श्रीमान आफ्नै हजुरबुबा भएको थाहा पाएपछि यस्तो सम्म भयो…
१काठमाडौं गोङ्गबुका सुजन पाख्रिनको शङ्कास्पद मृत्यु ! टोखा निवासी मनोजसहित ६ जना नियन्त्रणमा
२मरेको श्रीमतिको लाससङ्ग लगनगाठो गरेपछी
३मध्यरातमा आफ्ना मान्छेहरुलाई सुटुक्क बोलाएर कोरोनाको खोप लगाउन थालेपछि यसरी लखेटिए मेयर ….
४यी १७ जिल्ला तेस्रो लहरको अति उच्च जोखिममा, सतर्कता अपनाउँनु होस…
५बिबाह गरेको तीन महिनापछि श्रीमान आफ्नै हजुरबुबा भएको थाहा पाएपछि यस्तो सम्म भयो…
६हिट चरणमानै समाप्त भयो गौरीका सिंहको ओलम्पिक यात्रा
७निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएपनि होटल, रेष्टुरा पहिला झैं खुल्न पाएन..
८घाँस दिन गोठमा जाँदै गरेकी महिलाको हत्या
नयाँ आस – नया उमंगको”
२०७८ अषाढ १८, शुक्रबार (४ हफ्ता अघि)
रातको १ बजेको छ । निन्द्रा अझै छैन ।
त्यही दिन भरीको डरले मनमा घर बनाको छ ।
चिसो भएको मुटु — तिर्खा लागेको जस्तो हुदा पनि चिसो पानी छुन मन नि लाको छैन ।।
सयौं छाताहरुको रंगिन छाप्रो मा मैले पनि मेरो कदम त्यहाँ मिसाए ।
म त्यहि सयौं छातामा आफुलाई भित्र लेर गए । म उनिहरु सङ्ग मिसिय तर बाहिरी रुपमा मात्रै !!
करिब दिउँसो 12 बजे को अपराह्न्न । सौराहा क्षेत्र पुरै पानीले डुब्न लागेको आजको दिन 2078-03-17
यहा छाताले त पानी छेकेको छ । तर आँखामा त्रास र सातो सबैको छाएको थियो । साहेद परिवारको चिन्ता लागेको हो !! जन तन गुजारा गरेका बुढाबा..ले आज हत्तेरीका भन्दै एउटा काख मा नातिलाई च्यापेर भित्ताको आड लिनुभो । खासै लामो कुरा त भएन तर उहाको परिस्थिति लाई मैले पनि कतै कता महसुस गर्दैथिए । मैले सानू ३ बर्सको बाबुलाई हेर्दै बुबा कसैलाई कुर्दै हुनुन्छ र ? सोधे,
जेठो छोरा आउदैछ नानी थुप्रै सामान सार्न छ। कुरेको क्या रे : खै अझै आउदैन भन्दै वरिपरि , घरी अगि, घरी पछि फर्कदै गर्नु भो ।
मैले सान्त्वना दिनलाई बुबा नआत्तिनु ।। आउदैन बाढी ,, कैजानी आयो भने पनि सुरक्षित बस्न हाम्रोमा आउनुस न भने 
सानो मिठो मुस्कान दिएर हैन कान्छी ।। पल्तीर भाउजूकै बस्ने कुरा छ । सामान पनि त्येतै तिर ततेरिदिने कुरा छ। कान्छा छोरा का छ का घरमा अत्तोपत्तो छैन । यै जेठाले नि अबेर गर्छ । केटाकेटी भोकाइ सके भन्दै बाटो तिर आँखा लगेको मीत लाई लिन पथाएको सन्को मान्नुभो । हिन्नु बुवा भन्दै सानो बाबुलाई काखमा च्याप्नु भो ।। ल तनि कान्छी आफ्नो ख्याल राखे है सुरक्षीत हुनु है भन्दै सानुबाबुले taa – taa गर्न लाग्यो । सानू मुख बनायेर ।।
उहाँ जानू भो । कारखानाको कोलाहल थिएन यहाँ । तर मनमा डर उत्तिकै बढी उत्तिकै त्रास थियो । वरिपरि गैरी वारि भरिसकेको थियो । बद्द्दो हुरि सरहको हिलो पानीको बेगले ।।
न बिद्युत न त खानेपानी न घाम यहाँ केबल त्रास छायको छ। साना केटाकेटी, बुद्धहरु , बा आमा , अनि जिम्मेवारीले गिद्दियेको त्यि युवा :- यहाँ कसैलाई सान्ती छैन । जे जति भयेपनी भोलिको बिहानमा घाम झुल्कियोस । काधको भारी ढाडसम्म सारिदिन पनि नाम्लो कसैले दिन भ्याको छैन्न ।। सबै राम्रोसँग मिलोस अब भन्दै सिरानी लिए । आज को रात पछि भन्दै सोचेको कुरा आज 2078-03-18 गते पूरा भयेको छ। आज घाम झुल्येको छ। एक नया उमङ्ग सङ्ग्☺️